Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ပုံပြင်ထဲက အရသာ
Writer Sein Lyan Time 6:17 pm
ကိုဖိုးစိတ် ဆီ ၁ လာလုတယ် ...
ဝသန်နဲ့ ပြိုင်ရမယ် ဆိုပဲ ...
ဖတ်တာတော့ နောက်မှ ဖတ်မှာ
အယ် ကိုဒေး ကြည့်ဦး
အမြဲတမ်း ၁ နိုင်ပါစေ
ဟင့် သေစမ်း မြန်လိုက်ကြတာ
24 June 2009 at 18:23
ပုံပြင်ကလည်း မစင် ပုံပြင်ကြီး။ တော်တော်နောက်တယ်။
ရှေ့ ကအကိုတော်တွေ နံပါတ်ယူပြီးပြီ မို့ မေလေးယူတော့ဘူးနော်.
စကားမစပ် ကိုဖိုးချိန်ကရော ၁ အမတ်လား
ကျွန်တော်ကတော့ ၄ အမတ်ပဲ လုပ်မယ်
ကိုဝသန့်ကို ၂ ပေးလိုက်
ကိုချိန် ၁ လုပ်
မှတ်ချက်။ ။ ဒီညနေစာ မစားတော့ပါ ။။။ :D
ကိုကြီးတို့ မိသားစုလေးက တကယ်နွေးထွေးကြ
ဟဲဟဲ အမတ် နေရာ မှားပေးတာ တော်သေးလို့ သေတော့မလို့ :D
ညီလေး နေဒေး တို့ ကတော့ မြန်ပါ့ကွာ။
မစင် ဆိုတာနဲ့ ပြေးလာတော့တာကိုကွ။
ကျနော် အဖေက ပုံမပြောပြတက်ဘူး။
အဖေ ဆိုတဲ့ ကရင် သီချင်းတော့ နည်နည်း ရတယ်။
၄ အမတ်ကြီး ကို ဒေးကတော့
ရှုလို့ ပီးသွားပြီး)
ကျွန်တော် ကတော့ မင်းတြားကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်
ကိုစိန် က ၁ အမတ်
ညိလေး ကောက်ကောက် စိန်မျောက်မျောက်
ဒီပုံပြင်လေး မနက်တိုင်း သတိရနေတော့မှာ.. သေချာတယ်။
အမြဲ ကျန်းမာပကတိ ချမ်းသာစွာ ရှိပါစေဗျာ
ဘယ်မှာလဲ ဘယ်မှာလဲ အနံ့ တောင် မကျန်တော့ပါလား.. ဟားဟား
ကိုကြီးဖိုးစိန်ရေ ဒီနေရာမှာ တော့ နံပတ် မယူချင်တော့ လို့ ပြန်သွးပြီး ရလဲ ရဘဲနဲ..ဟဲ...ဟဲ...
တို့လဲ ကုန်လောက်မှ လာတယ် စိန်၊ အမြဲအမှတ်ရနေမှာ သေချာပါတယ်
ဖိုးစိန်ချီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးစ် ကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲ သူပြောပြဖူးတာပဲ...
ချို ချဉ် ခါး လေး .. တခု မှ မကြိုက်လို့..
မစပ်တယ်ဆို ရင်တော့ မြည်းမလားလို့ 
စဉ်းစား နေတာ ။။
ရှေ့ က လူတွေ စားတာ နဲ့ ကုန်သွားလို့ 
တော်သေးတာပေါ့ ကွယ်။။ ဟိဟိ
အဖေက ပုံအပြောကောင်းတယ်နော်.. စိန်တို့မိသားစုလေးက ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.. ဖတ်ပြီး ကြည်နူးရတယ်
ဆိုးနေပါလား ပုံပြင်က...နာမည်ကသာ ဆိုးပေးမယ့် အတုယူစရာ မှတ်သားစရာတွေက အများကြီးပေးခဲ့တာကိုး...ပုံပြင်ကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲဗျာ :)
မစင် ပုံပြင်ပေါ့..ဟားဟား...း-)
တော်ပါပေတယ် ကိုဖိုးစိန်ရေ.. တကယ်ကို တော်ပါပေတယ်..း).. အီးဋီကာ ရေးနေတဲ့ ကျနော်တောင် အရှုံးပေးပြန်သွားတယ်.. ဟားဟား..
မစင်ရယ် အီးရယ် အဲဒါတွေနဲ့ပဲတိုးနေတယ် :P
ခုလည်း အရသာခံနေပြန်ပေါ့ :D:D
အဟ.. မစင် အကြောင်းပေါ့ မိုက်ပါ့ဗျာ....
အရသာ ဘာလဲတော့ တိမှာမဟုတ်ဘူး...
ပိပီပီး ကိုတော့သိမှာ ..အဟတ်
(ညအိပ်တဲ့ အခါကျရင်လဲ ညတိုင်းညတိုင်း ပုံပြင်ပြောပြရမယ်နော်....မောင် )
ထက်ထက်မိုးဦး ကာတီးရား စိန်တိုက် ကြော်ငြာသံဖြင့် ပြောသွားခြင်း ....
အမတ်ကြီးလေးယောက် အဲဒီဘုရင်ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ တော်တော် stress များမှာပဲနော်... (ကိုယ်ချင်းစာသွားသည်)
ဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲလို့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်သွားရတယ် ပုံပြင်းလေးကကောင်းပ
It'd better to comment latter. The latter the better...:(
နံပါတ် မှာ ၃၄ ဟွန်းးးး
ပုံပြင် လန်းလန်းလေးတွေ ရေးပါအုံးနော်...
ေ-းပုံပြင်ရယ် -ီး ပုံပြင်ရယ်...
အကိုတော် စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ် ပုံပြင်တွေကိုကြိုက်တယ် နောက်ထပ်ပုံပြင်တွေလည်းပြောပြဦးလေနော် ထောပတ်သီးငယ်ငယ်ကလည်းပုံပြင်ပြောပြရင်တအားကြိုက်တယ် ပြီးတော့မှအိပ်တယ် မပြောမချင်းဂျီကျတတ်တယ်
ကိုနေဒေးတို့ကတော့ မြန်ချက် အမြဲမြန်တတ်တဲ့ ကိုဝသန်တောင် လိုက်မမှီဘူး မစင်လည်းဆိုရော အဟိ နောက်တာ။ ကိုဖိုးစိန်တို့ မိသားစုက ပျော်စရာကြီးနော်။ ပုံပြင်ကို သေသေချာချာ မှတ်မိတာကိုတော့ အံ့သြပါရဲ့ အသံနေအသံထားနဲ့ကိုရေးထားတာ။ ပါးလုံးကတော့ နောက်ဆုံးနဲ့တူတယ်နော်။ အဟိ။
ဟုတ်တယ်နော်။ အဘွားတွေ ပုံပြင်ပြောတာတွေကို သတိရတယ်။ ခုကြီးလာတော့ ဘယ်သူမှလဲ ပုံပြင်မပြောပြတော့ဘူး။ :(
အခုရောက်ရော ဘာမှကို မရှိတော့ဘူး ပြောင်လို့ ရှင်းလို့
စာဖတ်သူတွေကို ပြုံးပျော်စေတာကိုက ရေးသူရဲ့
နေဒေးတို့ကတော့ မစင်ဆိုလဲ နံပါတ် ၁ ပဲ..တော်ပါ့.း)
ဗဟု သုတ တိုးပါ ဘိဗျာ
ခိခိခိခိ....အဟတ်ဟတ်ဟားဟားဟား.......................ကောင်းပါ့ ဗျား...ခုတော့ထိပြီပေါ့ ....ချစ်တဲ့ညီလေးများနေရာလုကြရာဝယ်........အ၇သာ.....စုံတဲ့ .....အီအီးပုံနဲ့ တိုးပါရောလား....ချစ်တဲ့ ညီလေး...နေဒေးနဲ့ ...နေရာလုမြန်တဲ့ ...ချစ်ဝသန်ရေ...သတိနော်အချိုနဲ့ .....အချဉ်..တွေစိန်လေးကထောင်ထားတယ်ကွဲ့ .....အဲဒီစိန်ကဒီလိုလုပ်တတ်တယ်...အကို့ ကိုတောင်.........သူနဲ့ နှုပ်ဆက်ရင်တဲ့ ...ချစ်ပိန်းညိညိ..ညိညိကလန်လို့ ..မွန်လိုသူ့ ကို..နှုပ်ဆက်မှသူကကြိုက်တာတဲ့ ဗျား..........အဓိပါယ်သူ့ ကိုသာ...မေးကြည့် ပေတော .........့ ညီလေးတို့ ရေ......ညီလေးတွေကိုချစ်တဲ့ ကိုကြီး.........သုဒြေ္န
25 June 2009 at 18:37
အရင်ဆုံး.... နှပ်ချီး...... ပြီးတော့...ရှူးရှူး..
ဖိုးစိန်ရေ နင့်ဟာ မရိုးတော့ဘူးနော်..
it's really good post. No wonder you get second prize in Burmese language. I like your writing so much. Keep chin up....my bro. Love all of your father 's stories.